Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Iqela elitsha lobunkokeli libhengezwe nguAprecia
UKyle Smith uye wabizwa ngokuba nguMongameli kunye neGosa eliyiNtloko eliSebenzayo le-Aprecia Pharmaceuticals, LLC, esebenza ngokukhawuleza. UMnu. Smith ngumdlali we-10 weminyaka kunye ne-Aprecia kwaye usebenze njengoSekela Mongameli weMisebenzi kwiminyaka eyi-3 edlulileyo. NjengoMongameli kunye neGosa eliyiNtloko lezeMisebenzi, uMnu. Smith uya kuba noxanduva lokukhokela imisebenzi yemihla ngemihla yoshishino.
I-Aprecia iye yomeleza ngakumbi iqela layo lobunkokeli ngokukhuthaza uPatrick Staudt kwi-Vice-President of Operations, esebenzayo ngokukhawuleza. Umlindi we-14 we-Aprecia, uMnu. Staudt uye wakhokela i-East Windsor, i-NJ imisebenzi yokuvelisa iminyaka engaphezu kwe-10 kwaye ibonise italente kunye namava okukhokelela ekulindelweyo, ukukhula okukhulayo ngokusebenzisa iiplatifomu ezininzi zeteknoloji.
UMnu Smith kunye noMnu Staudt baye baba sisiseko sembali ye-Aprecia yeteknoloji kunye nokuveliswa kwezinto ezintsha. Baye baba ngabaxhasi abaphambili ekusekeni inkampani njengenkokeli ekuphuhliseni nasekuveliseni iimveliso zamachiza nge-3D-Printing. Amava abo kunye ne-Aprecia aye anceda ukwenza inkcubeko yenkampani kunye ne-3DP yokuvelisa amayeza, kwaye igalelo labo liye ladala umfutho oqhubekayo ukukhawuleza ngokusebenzisa intsebenziswano ebalulekileyo kunye neemveliso zenoveli.
“Njengoko amaqonga etekhnoloji e-Aprecia esanda kwaye ubuhlakani beshishini buqhubela phambili, i-Aprecia ifuna italente eyongezelelweyo kunye nezixhobo zokuhlangabezana nezi mfuno zikhulayo,” utshilo uChris Gilmore, iGosa eliyiNtloko yeSigqeba se-Aprecia. “Sinethamsanqa lokuba nezi ngcaphephe zetekhnoloji zinamava kunye neenkokheli zeshishini ukukhuthaza nokukhokela ukukhula kombutho kwikamva.
UMnu. Kyle Smith unesidanga se-Master of Business Administration kwiYunivesithi yaseMiami, kunye ne-Bachelor of Science kwi-Chemical Engineering evela kwi-Georgia Institute of Technology.
UMnu. Patrick Staudt unesidanga seNzululwazi kwiBiomedical/Medical Engineering kwiDrexel University.